Ibraahin Cismaan Oo Lago’aamiyay Inuu Noqdo Mayorka Magaalada Diridhaba - Cakaara News
Ibraahin Cismaan Oo Lago’aamiyay Inuu Noqdo Mayorka Magaalada Diridhaba
Jigjiga(CN) Khamiis, 29ka October 2015, Hogaaminta sare ee XDSHSI ayaa go'aamiyay in uu Mudane Ibraahin Cismaan Faarax noqdo Mayorka magaalada DiriDhaba ee shanta sano ee soo socota iyadoo hogaamintu maalmihii lasoo dhaafay kuhawlanaa xulashada hogaaminta kabineetka iyo madax xafiiseedyada maamulka magaalada diridhaba.
Hadaba, shir ay galeen hogaaminta xarunta dhexe ee XDSHSI ayaa lagu go’aamiyay mayorka shanta sano ee soo socota inuu noqdo mudanaha magaciisu sare kucad yahay isagoo xisbigu go’aankiisa hordhigay xisbiga talada wadanka haya ee EPRDF oo cod buuxa kuqaatay go'aanka XDSHSI.
Dhanka kalana, afhayeenka golaha xildhibanada ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq oo ay weheliyaan madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar iyo wasiirka xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga mudane khadar Cabdi Ismaaciil ayaa wakhti xaadirkan kujira dhisida iyo soo xulitaanka xubnaha kabineetka maamulka magaalada diridhaba.
Heshiis uu ansixiyay ururka EPRDF ayaana dhigaya in maamulka magaalada diridhaba uu noqdo shantii sanaba in urur hogaamiyo waxaana shantii sano ee lasoo dhaafay mayor kasoo ahaa ururka OPDO. Sidaas awgeed, shantan sano ee soo socota waxaa hogaamin XDSHSI.Iyadoo uu maamulku si toos ah u hoos tagayo xukuumada federaalka ah.
Ugudanbayna, waxaan dib idiinka soo gudbin doonaa xulashada xubnaha kale ee kabineetka maamulka magaalada diridhaba ee uu XDSHSI dhisayo.